Somaliland: Edna Aadan oo ka Digtay in si Khaldan Loo Adeegsado Dhallinyarada - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Edna Aadan oo ka Digtay in si Khaldan Loo Adeegsado Dhallinyarada
Somaliland: Edna Aadan oo ka Digtay in si Khaldan Loo Adeegsado Dhallinyarada
Ergeyga Somaliland u qaabilsan wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya, Dr. Edna Aadan Ismaaciil, ayaa ka hadashay khilaafka ka dhashay natiijada doorashada madaxtinimada Somaliland ee aan weli lagu dhawaaqin.
Waxaanay tusaale u soo qaadatay sidii xurmada iyo sharafta lahayd ee madaxweyneyaashii kala danbeeyay ee qarankan soo maray Axmed Siilaanyo iyo Daahir Rayaale Kaahin ay isugu wareejiyeen jagada madaxweynenimo.
“Si wanaagsan oo aqlabiyad ah ayuu Siilaanyo uga helay doorashadii Daahir Riyaale Kaahin, madaxweynaha jagada madaxtinimada lagaga guulaystayna si fiican ayuu Siilaanyo u hanbalyeeyay, intii Somaliland jeclayd way ku faraxday. Dadkii nidaamka distoorka ku jirayna waa ay jeclaadeen, caddawgiina waa uu ka naxay, hase ahaate labadaasi nin waa ay isu hanbalyeeyeen, hawshii ayay la kala wareegeen, xaflad qurux badan oo markhaatiyo lahayd ayay xilkii kula kala wareegeen” ayay tidhi marwo Edna Aadan, oo shalay warbaahinta kula hadashay Hargaysa.
Dr. Edna waxay sheegtay masuuliyiinta xisbiyada mucaaridku inay dhibaatooyinka dhacaya ay u adeegsanayaan caruur kuwaasoo aan garanayn dhibta iyo waxa laga dhaxlo dagaalka. Waxaanay tidhi “Waxay isticmaaleen caruurtii yar yarayd ee dhalinyarada ahayd, kuwaasoo aan garanayn dhibaatada uu dagaalku keeno, qoxoonti may soo marin oo darxumadii qaxoontiga hooyooyinkood iyo Aabayaashood ha ka waraysteen, xasuuq may arag oo waa kuwaas maanta nool, 27-ka sano cidi diyaarad umay qaadin oo may duqayn, xaasaskooda hortooda laguma faro xumayn.
Hablahooda hortooda laguma faro xumayn, magacyo aanay gayin looguma yeedhin, hadana waxaa naxdin weyn leh in dhalinyaradii wax lagu xalili kari lahaa hadiiba cabasho jirto”.
“Haddii ay cabasho jirto wixii qofku ku cabanayay badka ayuu keenaa oo gartiisu akhristaa, inay cidi cid dhacda-na Somaliland ma ogola. Waxa wanaagsan haddii cabasho jirto in miiska la keeno, laguna markhaati furo cidii dhibaatada gaysatay aduunku-na yidhaahdo qofkaasow khaladkaad gashay oo aad ka gasheen dadkaasi kale.
Gar-baa qofkaasi helayaa oo wuu guulaysanayaa, hase ahaatee marka caruur yaryar la kiciyo shucuurtooda oo la yidhaahdo orda oo dagaalama, haddii caruurtii is-dirto oo la celin waayo waxaan u arkaa inay meel ka dhac ku tahay Somaliland. Somaliland ma geydo caruurtaa dagaalantay hadhawbaa xiidmahooda oo kala laalaada meelahaasi lagaga tegayaa kuwaa ay u dagaalamayeena baasaabooro ajaaniba ayay sitaan oo halkaasi ayay kaga tegayaan,” ayay tidhi Dr. Edna Aadan.
Somaliland: “Hab Maamuuska Wasaaradda Ayay Ceeb Ku Tahay Arrintaasi…” Xildhibaan Qabile Oo Si Adag Uga Hadlay Labada Wasaaradood Ee Wasiirka Looga Dhigay Sacad Cali Shire